> Resource> iTunes> Free Tag Editor maka iTunes - MusicBrainz Picard
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe dị mfe na-eji ngwá ọrụ na-akpaghị aka ịchọta ozi maka gị niile songs, gụnyere omenkà, album, album nkà, lyrics, na-ewepụ duplicated songs gị music n'ọbá akwụkwọ. TidyMyMusic ga-abụ ezigbo nhọrọ. Mụtakwuo >>
Ọ bụ ezie na iTunes abịa na a wuru na-mkpado nchịkọta akụkọ gbanwee na ọmụma nke na mkpado dị ka aha, ọgụ egwu, album omenkà, nkụzị, wdg,
ọ bụghị ike zuru ezu. Isiokwu a ga-ewebata a free mkpado nchịkọta akụkọ nke iTunes songs na ma Mac na Windows.
MusicBrainz Picard bụ a free mkpado nchịkọta akụkọ na iji ma ama MusicBrainz nchekwa data nke bụ ọrụ na onye-nọgidere na-enwe metadatabase nke album ọmụma. Dị ka ukara MusicBrainz tagger, Picard na-atụ aro kpọmkwem mkpado mgbanwe gị music dabeere otu faịlụ aha, na ọkara na-akpaghị aka mata songs gị collection. Ọ bụ a cross-ikpo okwu mkpado nchịkọta akụkọ ma Windows, Mac na Linux. Download ya ebe a.
Key Akụkụ nke MusicBrainz Picard
Ina malitere na-agbakwunye iTunes faịlụ ma ọ bụ nchekwa MusicBrainz Picard na ekpe ebi ndụ. Ọ ga-agụ metadata si faịlụ niile na ọ bụrụ na ha e tagged tupu, faịlụ ga-etinye n'ime "Unmatched faịlụ" nchekwa. Mgbe ahụ nnọọ pịa Ụyọkọ bọtịnụ na-ejupụta ha n'ime ọhụrụ album. Mgbe ahụ, ịdọrọ na dobe Album aka nri ebi ndụ, na ego egwuregwu mma. Ọ bụrụ na afọ ju, ị nwere ike nri pịa ọ bụla track na-ahọrọ "Save" dee metadata ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. I nwekwara ike họrọ multiple tracks na nri ebi ndụ na-azọpụta niile mgbanwe tracks.
Họrọ ụyọkọ ma ọ bụ faịlụ na pịa "Lookup" bọtịnụ na toolbar, Picard ga ajụjụ MusicBrainz nchekwa data chọta kasị mma na egwuregwu. Na ọ ga-ọkọlọtọ na egwu na a green, red, ma ọ bụ oroma ọkọlọtọ na-egosi otú nso nke a egwuregwu ọ bụla faịlụ bụ ka MusicBrainz nchekwa data.
Ọ bụrụ na akpaka Nchọgharị enye etịbe results ma ọ bụ ọ na-arụpụta, họrọ ụyọkọ ma ọ bụ faịlụ na ị chọrọ Nchọgharị na-eji otu nke ala "Lookup" buttons na Picard. A na-emeghere MusicBrainz website na ndepụta nke kwere omume ọkụ n'ihi na gị akwụkwọ.
Picard nwere ike na-agbalị na ịkpado gị faịlụ dabere na ha AcousticFingerprints nke songs. Iji mee otú ahụ, họrọ a set nke faịlụ na pịa "iṅomi".
Kenha Files & Azọpụta
The song tracks na nri ebi ndụ ga-amalite na a icon mgbe achọ elu MusicBrainz nchekwa data, na mgbe tracks na-metụtara gị faịlụ (site Dọrọ na dobe aka nri), na akara ngosi na mgbanwe otu n'ime ndị na-esonụ:
1. A obere rektangulu sitere na site red ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egosi àgwà nke egwuregwu, ebe red bụ ihe ọjọọ egwuregwu na green bụ ezigbo egwuregwu
2. A red njehie triangle pụtara Picard okosobode njehie.
3. A green ego akara na-egosi na track bụ ruo ụbọchị na-azọpụta ka iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ị pụrụ ịhụ ya na iTunes. Ọ bụrụ na, melite Ama site Get Info iwu.
Ịdọ aka ná ntị: adịghị inokota gị ọbá akwụkwọ nke dị n'etiti iji MusicBrainz Picard, consolidating n'ọbá akwụkwọ ga-mere n'ihu ma ọ bụ mgbe.
5 Atụmatụ-eburu n'Uche iwughachi Your Library